महिलाहरुको दरको रुपमा विशेषगरी के खान हुन्छ, के खान हुँदैन ? – Everest Dainik
महिलाहरुको दरको रुपमा विशेषगरी के खान हुन्छ, के खान हुँदैन ?
साउन २८ । हिन्दू महिलाहरुको महान् चाड हरितालिका (तीज) नजिकिँदै गएको छ । महिलाहरु रातो सारी र विभिन्न गरगहनाहरुमा सजिसजाउ भएर तीजको दर खान साथी संगिनी मिली पार्टी प्यालेसहरुमा चहलपहल बढिरहेको छ ।
पहिले पहिले दर खाने एक दिनमात्र त्यो पनि १२ बजेसम्ममा खाइसक्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको थियो भने अहिले समयकाल परिवर्तन सँगसँगै एक महिनाअघि देखि दर खाने चलन भित्रिसकेको छ ।
हरितालिका (तीज) मा हिन्दू महिलाहरु व्रत बसी पूजाआजा गर्ने र नाचगान गर्ने चलन छ । तर, हिजोआज तीज आउनुभन्दा हप्तौँ अघिदेखि दर खाने र खुवाउने कार्यक्रम भइरहेका हुन्छन् । सहरबजारमा हुने यस्ता दर कार्यक्रममा सात्विक तथा तामसिक भोजन समावेश हुन्छन् ।
दरका नाममा मादक पदार्थको प्रयोग तथा खानाको अति प्रयोगले व्यक्तिको शारीरिक स्वास्थ्यमा त असर पुर्‍याउँछ नै, सामाजिक स्वास्थ्य समेत खलबलिन्छ । दरका नाममा धेरै खानु वा भारी खानु अनावश्यक मात्र होइन, घातक पनि हुन सक्छ । त्यसैले दर खाँदा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।
धेरै नखाने ?
स्वच्छ खाने ?
पोषणका लागि दरमा दुग्ध खाद्य पदार्थ खानु राम्रो मानिन्छ । दूध, दही, मखन, घिउ जस्ता खानेकुराले शरीरलाई लामो समय शक्ति दिने खाद्य प्राविधिज्ञ बताउँछन् । व्रतको राति अबेर खाएर शरीरलाई व्रतका लागि तयार गर्नु उपयुक्त हुने खाद्य प्राविधिज्ञ चापागाइँको सुझाव छ । शरीरका लागि ग्लुकोज तथा कार्बोहाइड्रेड दिने खालका खानेकुरा उनी सुझाउँछन् । यसका लागि फलफूल तथा अन्नबाट बनेका परिकार खानुपर्छ । मधुमेह, रक्तचाप, ग्याष्ट्रिकका समस्या भएका बिरामीले दर खाँदा खानाको सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता बिरामीले सबेसम्म निराहार व्रत पन्छाउनु नै राम्रो मानिन्छ।
ट्याग्स: Nepali Feature Story